Fanairana Momba Ny Fomba Fampijaliana — Endrika Abu Ghraib — Ao Amin’ny Foibe Fitazonana Tanora Ao Amin’ny Faritany Avaratra ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Fanairana Momba Ny Fomba Fampijaliana — Endrika Abu Ghraib — Ao Amin'ny Foibe Fitazonana Tanora Ao Amin'ny Faritany Avaratra ao Aostralia
Voadika ny 02 Aogositra 2016 5:32 GMT
Dikasary avy amin'ny ‘Henatr'i Australia’ – Fandaharana ABC Four Corners
Rehefa nalefa tamin'ny fahitalavitra nasionaly ka nanaitra ny mpijery ny sarin'ireo ankizy nampijaliana tamin'ny fomba Abu Ghraib ao amin'ny toerana iray fitazonana tanora any amin'ny Faritany Avaratr'i Aostralia dia miantso ny fandraisana andraikitra ara-politika sy ny fanaovana fanadihadihana lalina momba ireo famonjana manerana ny firenena ireo Aostralianina maro, indrindra fa ho an'ireo mponina tena marefo: ireo ankizy teratany. Nitatitra ny fampijaliana nandritra ny taona maro ny fampitam-baovao ao an-toerana sy ireo vondrona mpiaro ny zo any amin'ny Faritany Avaratra, saingy tsy niraharaha ny vahoaka sy ny governemanta.
Na dia mirefy 1.349.129 kilaometatra toradroa aza ny Faritany Avaratra dia misy mponina 243.700 ary Aostraliana vazimba teratany ny ampahatelon'izany.
Nandefa lahatsary be dia be nalaina tao amin'ny foibe Don Dale tamin'ny 2014 ny Four Corners, ilay Orinasa Fahitalavitra Aostraliana mampiseho vaovao isan-kerinandro, tamin'ny lahatsary mitondra ny lohateny hoe Ny Henatr'i Aostralia izay mampiseho ireo tanora maditra “nesorina akanjo, novonoina sy nasiana baomba mandatsa dranomaso.”
Taorian'ny fandefasana ilay lahatsary, nanambara ny governemanta Aostraliana fa hametraka “Vaomieram-panjakana” mba hanaraha-maso ny fanararaotana atao amin'ny ankizy ao amin'ny fonjan'ny tanora Don Dale. Fanaovana fanadihadiam-panjakana lehibe vonjimaika sy ara-dalàna ny “Vaomieram-panjakana” ary manana fahefana mahefa. Nahavita nanao fanadihadiana am-pahombiazana tamin'ny polisy sy ny kolikoly nataon'ny governemanta ary fikambanan-jiolahy ny “Vaomieram-panjakana” ao Aostralia. Naneho hevitra ny Praiminisitra Malcolm Turbull rehefa avy nanambara ny Vaomieram-panjakana hoe “Tianay ho fantatra ny antony mampisy fanadihadiana ao amin'ny foibe , izay tsy nanodina ny porofo sy ny vaovao izay hitantsika tao amin'ny Four Corners omaly alina “. Nanomboka tamin'ny 2011, fara fahakeliny, fanadihadiana telo no efa nijery ny fonjan'ny ankizy ao amin'ny Faritany Avaratra (NT) kanefa tsy dia nitondra fahombiazana ny tatitra nataon'izy ireo.
Hoy ilay mpanolotra Sarah Ferguson ao amin'ny Four Corners rehefa nanolotra ny fandaharana maharitra 50 minitra tao amin'ny fahitalavitra izy:
Ny sary izay vao hitanareo dia tsy avy any amin'ny helodranon'i Guantanamo…. na Abu Ghraib .. fa ao Aostralia tamin'ny 2015 … Zazalahy iray, misaron-doha, mifatotra, amin'ny fehikibo eo amin'ny seza ary navela irery. Tena feno habibiana.
Izany no famaizana ireo tanora ao amin'ny Faritany Avaratra, rafitra fanasaziana ireo ankizy manana olana fa tsy manarina azy ireo – izay ahitana zaza vao 10 taona monja mihidy ary ireo ankizy 13 taona natokan-toerana.
Narovan'ny Four Corners ny ankamaroan'ireo sary amin'ny fanadihadiana izay tsy naseho daholobe mihitsy. Manafintohina izy ireo – fa noho ny amin'ireo ankizy izay diso fanantenana ny amin'ny fahafantarana ny marina dia tsy afaka ny hody fanina fotsiny izany izahay.
Nisioka ny mpijery sasany fa tsy mahavita mijery izany:
@Doc_Samantha Tsy mahavita mijery ny # 4corners aho- ampy [aoka izay] ny sary sy famariparitana ny fampijaliana ankizy ao Syria sy any amin'ny Faritany Avaratra!
Nisy avy hatrany ireo valinteny an-tserasera rehefa nahita ny zava-doza sy ny fitarainan'ny mpijery niely patrana. Ohatra fanehoana izany ny siokan'i Samantha Thomas:
Tsy afaka ao an-tsaiko ny #4corners Marary ny foko mieritreritra mandritra ny tontolo andro ireo ankizy. 😢
Naneho ny fitovian-kevitra tamin'ny henatra i Hilly:
Ny henatr'i Aostralia #4Corners
Efa nanao fitarainana maro nandritra ny taona maro ireo olona teratany [Aboriginal] .
Niresaka momba ilay fomba fanasaziana nandritra ny taona maro ny olona teratany. Mila olona bebe kokoa izahay hihaino anay rehefa miteny . #dondale # 4Corners
@JaneCaro Efa nisioka izany im-betsaka aho tamin'ny Aprily sy May – Nahafantatra ny fampitam-baovao sy ny PM fa tsy nanao na inona na inona pic.twitter.com/v9VBDOp3zD
Maro no mihevitra fa tokony hivelatra bebe kokoa araka izay azo atao ny sehatra misy ny Vaomieram-panjakana:
Mila mivelatra kokoa noho i Faritany Avaratra ny Vaomieram-panjakana ary hijery ny famonjana ireo ankizy teratany any amin'ny fanjakana rehetra . # 4corners
Noresahana ihany koa ireo foibe famonjana any an-dranomasina hoan'ny mpangataka fialokalofana ao Aostralia any amin'ny nosy Nauru sy Manus .
Tokony hitarina bebe kokoa hatrany ny vaomieram-panjakana hampidirana Nauru/Manus sy hitatitra ireo tranga hafa any Aostralia Andrefana sy Queensland # 4Corners
Laharam-pahamehana ny andraikitra ara-politika ho an'ireo mpijery. Nesorin'ny Lehiben'ny Minisitra tamin'ny andraikiny ny minisitra miandraikitra ny ny Fanarenana [olona lavo] ao amin'ny Faritany Avaratra. Te-hahita asa bebe kokoa ireo mpisioka maro:
Voaroaka ny Minisitry ny Fanarenana [olona lavo] Elferink kanefa mitana ny minisiterany hafa! Nahoana? Voaheloka bavava noho ny tsirambina i Elferink
Tsy misy isalasalana fa meloka ny governemanta #NT [Faritany Avaratra]. Mila mandray andraikitra feno ary hametra-pialana ny lehiben'ny minisitra . # 4Corners #thedrum
Inona no nataon'i Nigel Scullion , Senateran'ny Faritany Avaratra sady Minisitry ny Raharahan'Indizeny federaly nanomboka tamin'ny Septambra 2013 , fantatrao ? #DonDale
Nanontaniana ny mpanao sivana tao amin'ny Facebook tamin'ny fanesorana ny ampahany tamin'ny lahatsary, satria hoe noho ny fitanjahana:
Io no lahatsary #4Corners izay nofafan'i #Facebook .
Azo jerena ato ny fandaharana manontolon'ny Four Corners .